FAA na-ewetu akara nchekwa ụgbọelu mba ofesi maka Pakistan
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » FAA na-ewetu akara nchekwa ụgbọelu mba ofesi maka Pakistan
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • News • Akụkọ na -agbasa ozi Pakistan • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
dere Harry S. Johnson
The Nchịkwa Federal Aviation (FAA) mara ọkwa taa na Pakistan ekenyela ọkwa otu udi nke abụọ n'ihi na ọ naghị asọpụrụ Civiltù Na-ahụ Maka Ọdụ ụgbọelu International (ICAO) ụkpụrụ nchekwa dị n'okpuru mmemme FAA nke International Aviation Safety Assessment (IASA).
N'okpuru IASA, FAA na-enyocha ndị ọrụ ụgbọelu nke obodo niile nwere ndị na-ebu ụgbọ elu na-etinye akwụkwọ ka ha gaa United States, na-eduzi arụmọrụ ugbu a na United States, ma ọ bụ soro na ndokwa ịmekọrịta koodu na ụgbọ elu ndị mmekọ US. Ndị Pakistan Civil Aviation Authority na-enye nlekọta nchekwa ụgbọelu maka Pakistan.
Nnyocha ndị IASA na-ekpebi ma ndị isi ụgbọ elu obodo ọzọ ga-agbaso ụkpụrụ nchekwa ICAO. ICAO bụ ụlọ ọrụ teknụzụ maka ụgbọelu n'okpuru United Nations. Nzukọ ahụ guzobere ụkpụrụ mba ụwa na omume nchekwa maka ọrụ ụgbọelu na ndozi ya.
Onu ogugu 1 putara na onye ikike obodo nke obodo na akwado iwu ICAO. Nke a na-enye ndị na-ebu ụgbọelu si mba ahụ ohere ịmalite ọrụ na United States na iburu koodu nke ndị na-ebu US site na ndokwa koodu.
A naghị ekwe ka ndị na-ebugharị ụgbọelu si mba nwere Categdị Nlekọta 2 bido ọrụ ọhụrụ na United States, machibidoro ọkwa nke ọrụ dị ugbu a na United States, ma enyeghị ha ikike iburu koodu nke ndị na-ebu US na ụgbọ elu ọ bụla. Ka ọ dị ugbu a, ọ nweghị ụgbọ elu na-eme njem njem oge niile na-eme njem n'etiti Pakistan na United States.
Harry S. Johnson na-arụ ọrụ na njem njem afọ 20. Ọ malitere ọrụ njem ya dịka onye nlekọta ụgbọ elu maka Alitalia, taa, na-arụ ọrụ maka TravelNewsGroup dị ka onye editọ maka afọ 8 gara aga. Harry bụ onye njem na-anụ ọkụ n'obi nke ọma.